Myanmar Tutor Learning Center
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 20 March 2012	ဝန်ထမ်းအမြန် အလိုရှိသည်။(ပြည်တွင်း၌သာ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ခန့်ထားရန်)
Computer Instructor (2 posts) •	ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ (သို့) ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (ကျောင်းကိစ္စ ပြီးစီးသူ ဖြစ်ရမည်။) •	အသက် ၂၂ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ရပါမည်။ •	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး စကားပြောရည်မွန်သူဖြစ်ရပါမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၍ သွက်လက်ဖျတ်လတ်ရမည်။•	Computer Hardware, Software Applications, Programming, Web Development နှင့် Networking ဘာသာရပ်များကို တတ်ကျွမ်းသူနှင့် သင်တန်းနည်းပြအတွေ့အကြုံရှိသူများကို အထူးဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါမည်။
အလုပ် အမှန်တကယ် တက်ကြွစွာ လုပ်လိုပါက……
၁။ ကိုယ်ရေး အထ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း ၂။ ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံ ၃။ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ၄။ သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ ၅။ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက် ၆။ ကွန်ပျူတာပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော အောင်လက်မှတ် မိတ္တူများနှင့်အတူ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Myanmar Tutor Learning Center အမှတ်-၂၁၉ ၊ ၄၀ လမ်း (အလယ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း - ၀၉ ၇၃၁ ၆၇၉၇၈, ၀၁ ၃၉၈၀၈၄
Myanmar Tutor Learning Center Written by မီမီး	Details
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 14 January 2012	ဝန်ထမ်း အမြန် အလိုရှိသည် (ပြည်တွင်း၌သာ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ခန့်ထားရန်)
Office Staff (Female –2posts)
- ပညာအရည်အချင်း အနည်းဆုံး ဘွဲ့ရ( ကျောင်းကိစ္စ ပြီးစီးသူ ဖြစ်ရမည်)- အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။- ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရပါမည်။- ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး စကားပြောရည်မွန်သူဖြစ်ရပါမည်။- ကွန်ပျူတာ အခြေခံ၊ Internet & Email တတ်ကျွမ်း၍ မြန်မာစာ စာစီစာရိုက် ကျွမ်းကျင်ရမည်။
အလုပ် အမှန်တကယ် တက်ကြွစွာ လုပ်လိုပါက…… - ကိုယ်ရေး အထ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း- ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံ- မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ- သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ- အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်- ကွန်ပျူတာ ပညာနှင့် သက်ဆိုင်သော အောင်လက်မှတ် မိတ္တူများနှင့်အတူ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အမှတ်-၂၁၉ (၅လွှာ)၊ ၄၀ လမ်း (အလယ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၉ ၇၃၁ ၆၇၉၇၈, ၀၁ ၃၉၈၀၈၄
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 01 November 2011	အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ‘အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်’မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။ No.3-B(3rd Floor)၊ မြေနီကုန်းပလာဇာ (ဒဂုံစင်တာနှင့် ဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်ကြား)၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
• Sales Supervisor ကျား/မ (၁) ဦး
• Sales Staff မ (၂) ဦး
• Helper ကျား (၁) ဦး
• Accountant မ (၁) ဦး
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ အနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ ဓာတ်ပုံ(၁)ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အခြားရရှိထားသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ သန်းခေါင်းစာရင်းနှင့်အတူ ( ၈-၁၁-၂၀၁၁) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 01 November 2011	အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ‘အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်’မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။ အမှတ် (၂၀၄)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ Ph: 385978
• Computer Technician ကျား (၂) ဦး
• Computer Sales Girl မ (၂) ဦး
- အသက် ၂၀-၂၅ နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
- ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သွက်လက်ချက်ချာသူ ဖြစ်ရမည်။
- မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်သူ ဖြစ်ရမည်။
- စည်းကမ်းရှိပြီး ရိုးသားသောသူဖြစ်ရမည်။
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
For Cosmetic Counter (Taw Win Center)
• Sales Girls မ (၂) ဦး
- အသက် ၁၈-၂၅ နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
- ၁၀ တန်းအောင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အချက်အလက်အပြည့်အစုံနှင့် ပညာအရည်အချင်းထောက်ခံစာ၊ မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံစာ မိတ္တူများနှင့်အတူ ရုံးချိန်အတွင်း (၈-၁၁-၂၀၁၁)နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Delta Engineering Services & Training Group
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 01 November 2011	အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ‘အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်’မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။ No.1199, Lat Well Min Din Road, Myitarnyunt Quarter, Tamwe Tsp. Ph:09 8616952, 09 5087739
1. Aircon Helper M(5) Posts
- အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။ (Aircon) ရေခဲသေတ္တာပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
2. Technician M(5) Posts
- Aircon ရေခဲသေတ္တာပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၃)နှစ်အထက် လုပ်ကိုင်ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။ မိမိလုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ ပညာအရည်အချင်းကို လျော့ပေါ့စဉ်းစားမည်။
3. Marketing F (3) Posts
- Aircon ရေခဲသေတ္တာ၊ Marketing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအကြောင်း နားမလည်ပါက အခြေခံမှ စသင်ကြားပေးမည်။ ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ရပ်ကွက်၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာနှင့် အတူ (၁၅-၁၁-၂၀၁၁) နောက်ဆုံးထားပြီး လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Vanda Living Mall
EON Engineering & General Trading Co.,Ltd
General Food Technology lndustry Co.,Ltd
K-Zin Garment Factory
Zeal` Coffee Loung & Restaurant
Start Prev 1234567 8910 Next End Page 1 of 76